» “माधव नेपाल,ले सम्धी,लाई दिए आर्थिक, विभाग प्रमुख,को जिम्मेवारी” “माधव नेपाल,ले सम्धी,लाई दिए आर्थिक, विभाग प्रमुख,को जिम्मेवारी” – हाम्रो खबर
“काठमाडौं, । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सोमप्रसाद पाण्डेले पाएका छन् । उनले पाल्पा जिल्ला इन्चार्जको समेत गरी दोहोरो जिम्मेवारी पाएका हुन् ।”
“पाल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पाण्डे नाताले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सम्धी हुन् । नेपालकी छोरी पाण्डेका छोराले विवाह गरेका छन् ।”
“पाण्डे माधव नेपालका विश्वासपात्र समेत मानिन्छन् । नेकपा एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा पाण्डेको हस्ताक्षर थिएन । पछि मात्र पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।”
“यो पनि:-“बालुवाटार,को गोप्य, भिडियो, भाइरल, देउवा, त’ना’बमा”
“काठमाडौ। प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा दशैंको टीका थापेर दाम राख्दै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त,नाव भएको छ। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दशैंको क्रममा कार्यकर्ताहरुलाई पनि टीका लगाइदिएका थिए।”
“सोही टिका लगाउने क्रममा एक जनाले दाम चढाएएका थिए। त्यही भिडियो अहिले टिकटकमा भाइरल भएको छ। दशैंको टीका थाप्न आएका एक कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री देउवाबाट टीका ग्रहणपछि दाम राखेर खुट्टा ढोगेको भिडियो सामाजि,क सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।”
“सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोले निकै चर्चा मात्र पाएको छैन, प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना समेत भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो शेयर गर्दै यसरी खुट्टामा दाम राखेर ढोगेको, दृश्यले राजा र रैती भन्ने पुरानै संस्कार÷प्रवृत्ति दोहोरिएन ? भन्दै चर्को आलोचना भएको हो।””
“यो घटनाले राजाकै शैलीमा उच्च ओहदाका ब्यक्तिले दशैमा टीका लगाइदिने क्रमको समेत आलोचना भएको छ। गणतन्त्रभन्दा पहिला राजाहरुलाई यसैगरी लाइन लागेर भेटि चढाउने चलन थियो । राजनीतिका उच्च नेतृत्वले समेत राजालाई, भेटि चढाएर टिका लगाउने चलन थियो।”
“त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पूर्वराजा विरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटि चढाएर टिका लगाएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति, शम्शेर जबरा लगायतका नेताहरु पनि लाइन लागेर टिका लगाउन दरवार पुग्ने गर्दथे।”
“यसैगरि, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनविरोधी काम गर्न थालेको भन्दैं ठूलै नेताले विद्रोह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजनपछि नेता नेपालले नेता कार्यकर्ताको भावनाविपरित काम गरेको, भन्दैं ती नेताले वि,द्रोह गरेको बताएका हुन्।”
“एमाले फुटाएका माधवकुमार नेपाललाई नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टी खोलेको केही दिनमै धक्का लागेको छ। पार्टी विभाजनपछि एस पार्टी सोलुखुम्बुका नेता बनेका तेन्जी शेर्पाले अध्यक्ष माधव नेपालको पार्टीमा वि,द्रो,ह गर्दै नेकपा एमालेमै फर्किएका छन्।”
“एस निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य समेत रहेका शेर्पा र जिल्ला कमिटी सदस्य सोना शेर्पा एमालेमै फर्किएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय र प्रभावशाली मानिएका शेर्पा विभाजनबाट बृहत् कम्युनिष्ट एकताको राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति नहुने भन्दै, एमालेमै फर्किएका हुन्।”
“बृहत कम्युनिष्ट एकताका लागि एमालेको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘फुट र विभाजनमा अल्मलिँदा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक विकासको बाटो अवरुद्ध हुन्छ ।”
“सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न एमालेलाई बलियो बनाउनुपर्छ।नेता शेर्पाले केही दिनभित्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटको सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटी नै एमालेमा समाहित, हुने दाबी समेत गरेका छन्।”
“तर मन्त्री पक्षधर नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र नेकपा एसका कार्यकर्ताले भने क्षमता हुनेले हेलिकोप्टर चढ्ने भन्दै वचाउ गरिरहेका छन । सत्ता पक्षका कार्यकर्ताले क्षमता भए तिमिहरु चढेर देखाउ भन्दै समाजिक सञ्जाल रंगाएका छन भने प्रतिपक्षले जनताको ठाउँमा ऋणको भारी वोकाएर हेलिकोप्टवाटै आकासको वाटो आउजाउ गर्नेहरुले सर्वहाराको हवला नदिन भनेर आलोचनासंगै बि,रोध पनि गरेका छन ।”
“चुनावी अभियान कि ? सरकारी कामकाज ?: स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आएको वेला मुख्यमन्त्री शाही गृहजिल्लामा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमको उद्घाटन तथा शिलान्यासमा आउनुले जिल्लावासी,लाई चुनाव लागेको अनुभुती भईरहेको छ।”
“सरकार बचाउन व्यस्त रहेको, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य प्रथामिकतामा राखेका कामहरु अलपत्र पारेर हेलिकप्टरमा गृह जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटनमा व्यस्त देखिनुलाई चुनावी अभियानको सुरुवात मान्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री ,शाहीले वडाका भेलामा गएर चुनाव त सर्छहोला तर तयारी गर्नुपर्ने वेला आएकाले सबै सदस्यता नविरकण कार्यकर्ता वढाउने काममा लाग्न निर्देशन समेत दिने गरेका छन ।”
“शनिबार मात्र मन्त्री शाहील गृह जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत आफु सहित कृषिमन्त्री कुर्मराज शाही, सांसद बिन्दमान विष्टसहित एकैदिन ५ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुुनुभएको थियो । रास्कोट ४ को श्र,द्धाञ्जली सभा, वडा भेला, तिलागुफामा खेलकुद प्रतियोगिताको उदघाटन, शुभकालिकाको एक लघु जलबिद्युतको उदघाटनदेखि नरहरीनाथ गाउँपालिकाको ,लालुमा सडक पुगेको घोषणा गर्नसम्म पुग्नुभयो।”